Aadde Yatnabbarsh Nigusee: ‘Siyaasni Oromoofi Madagaaskaar walitti fidu jiraachuu isaa hin beekun ture’ - BBC News Afaan Oromoo
Aadde Yatnabbarsh Nigusee: ‘Siyaasni Oromoofi Madagaaskaar walitti fidu jiraachuu isaa hin beekun ture’
Waltajjii marii 'Addis Wag' jedhamuufi magaalaa Dirree Dhawaatti dhihoo taasifame irratti wanti Aadde Yatnabbarsh Nigusee dubbatte jedhame miidiyaa hawaasaa gubbaa ijoo dubbii ture.
Marii kana irratti 'Oromoo Madagaskaaritti argeera' wanta jedhu dubbatte jedhameetu haasawamaa ture. Dhimma kana ilaalchisuun BBC'n gaaffii muraasa dhihesseeraaf.
BBC: Wanti namni ijoo dubbii godhate maal ture? Wanti waltajjii sana irratti dubbachuu feete maali?
Aadde Yatnabbarsh: Jechi 'saba' jedhu biyya jechuudha yaada jedhu ibsuf kanin fayyadame Amaarri tokko, Oromoonis ta'e Tigreen tokko eessayyuu jiraata. Oromoon eessayyuu jiraata. Oromoon Afaan malee saba miti, Tigreenis akkasi jedheen dubbadhe.
Marii 'Addis Wag' magaalaa Dirree Dhawaatti taasifame
Qaama miidhamummaan carraa naaf ta'e - Yetnabbarsh Nigusee
Irbaata qaro-dhabeeyyii hubachuuf dukkana keessa nyaatamu
Oromoon eessayyuu jiraata jedhee fakkeenya tokko kenneera. Biyyi sunis Madagaaskaar kan jedhamtudha. Kan ani jedhu fedhe namni tokko biyya keessa dhiisi odola irrattiyyuu argama kan jedhudha.
Dhugaa dubbachuuf hanga kaleessa (Kamisa) ganamaatti siyaasni Oromoofi Madagaaskaar walitti fidu jiraachuu isaa hin beeku. Osoon beeke fakkeenya kana hin fayyadamu, biyya biraas maqaa dhahu nan dandaha ture.
Wanti namoonni akka hubatan fedhe biyyoota gurguddaa keessa haa hafuuti odola Madagaaskaatti Oromoo argee beeka kan jedhuudha.
Namoonni jecha kana keessaa foo'ani waa'ee yaadakoo osoo hin dubbatin, dubbichi Oromoo Madagaaskaaritti argadheera ini jedhu argeera jedhutti jijjiirame. Isheen akkamitti qaroo dhabeeyyii taate agarte falmi jedhutti seene.
Wanti guddaa namoonni yaadakoo fayyadamani ergaa isaanii dabarsaniiru. Madagaaskaaritti argeera jechuun Madagaaskaariiti godaanani dhufan kanneen jedhan deeggaruudha jedhanii yaaduun waliilama.
Dubbiiin guutuu ani dubbadhe miidiyaalee garaagaraa irratti darbeera. Yaada isaan jedhan bakka ibse hin qabu.
Dubbiikoo keessa jecha sadii filanii baasuun Oromoo Madagaaskaaritti argeera jechuun hammina qabaatuu baatus bukoo bulfatan waan qabanif bukoo sana tolchuf namoonni yaalan jiru.
Jalqaba irratti na aarse, wanta ani hin jenne jette jedhani sammuu kiyya keessa yoo kaa'an nama aarsa. Bulee yoon yaadu garuu wanti waldhabaa jirru bilisummaa yaadaafiimi? Isaan yaadakooti jedhanii yaada isaanii yeroo ibsan yaadni isaanii ni kabajama.
Jarri kuni 'opporchunistiidha'. Carraa fayyadamanii beekamaa tahu kanneen barbaadanidha. Miidiyaa hawaasummaa irrattiimmoo ana caalaa nama kaanitu sirrii akka hin taane kan ibsaa jiru.
BBC: Namoonni dubbii ati dubbatte guutuu isaa viidiyoodhaan osoo ilaalani sirriitti hubatu jettee yaaddaa?
Aadde Yatnabbarsh: Viidiyoo guutuu isaa fuula fesbuukii kiyyaarrattu kaa'eera. Garuu irraa kutaniiti yaada jedhu fidani.
Namoonni yeroo odeeffannoo argatan guutuu isaa osoo dubbisan gaariidha.
Dubbiin tokko yeroo dubbatamu 'context' akkitti dubbatame maali? Kan jedhu ilaaluun bareeda. Kanaan achi akka waliin hin dubbanne balbala cufu.
Kan nama gaddisiisu olaantumaa bilisummaa yaadaa nama tokko kabachiisuuf kanneen qabsaa'an karaa sirrii hin taaneen yaada namoota kaani hacuucuuf yaaluun isaanii sirrii miti.
Anaan namni hawaasummaatti na beeka. Nama siyaasaa miti. Ta'us hin barbaadu.
Wanti hojjennuus tahe wanti dubbannu tokkollee ta'u baatu osoo wal fallessuu baate gaariidha jedheen yaada. Wanti ani dubbadhu sirriidha namoonni yaada koo fudhachuu qabu amantaa jedhu hin qabu.
Sababni isaas gara fuulduraa deemuuf tokko ta'u hin qabnu. Yaadakoo yaadaan mo'un ni danda'ama. Amma wanti ta'a jiru garuu maqaa walballeessudha.
Anaan kallattiin maqaa na balleessuuf akka ta'e kan agarsiisu immoo lakkoofsa bilbilaakoo marsariitii irratti kaa'aniiru. Kuni yakka. Yakkaan himatani adabni akka irratti darbu gochuun danda'ama.
Anaan ummata waliin kan walitti nafide Fesbuukii miti. Yookiin nama siyaasaa waanin ta'ef nabare miti. Kanaafuu, hojii kootti deebi'eera.
BBC: Haalli siyaasaa amma jiru wanta kana namni akka wal harkaa fuudhu taasiseera jettee yaaddaa?
Aadde Yatnabarsh: Namni baay'ee dubbii koo gara hin taanetti hin hiikne. Wanti na gamnachiisees kana. Namoonni kana raawwatan akka galmaan hin geenye ni beeku jedheen yaada.
Yaalii namoota muraasaati malee namoonni baay'ee Adaamaa, Iluu Abbaa Booraafi bakkeewwan kaaniiti naaf bilbilaniiru.
Guutuu isaa akka hin dhageenyeefi akkamin kana jette jedhani na gaafataniiru. Namni jecha hamaa natti dubbate hin jiru.
Ati akkamitti kana jetta namni naan jedhe jira. Walii isaa isaaf ibsinaan yeroon kuni badaa waan ta'ef osoo homaa jechuu baatte naan jedhe.
Qaama miidhamummaan sadarkaa gaarirra akkan gahu na taasise: Injifattuu badhaasa Noobeelii Looreet Yetnabbarsh Nigusee
Morokootti wiirtuu bayyaanachiisuu qaama miidhamtootaa
Miidhama qaama: Osoo isheetti hafeera tahe jechaa deessisan
4 Adooleessa 2019